1010zzz dia mpanakanto graffiti manokana | Famoronana an-tserasera
Psychedelia sy ny fikarohana ny graffiti lalina amin'ny 1010zz
1010zzz no anaran'ity mpanakanto graffiti ity ary ahafahanao mampifandray ny sasany amin'ireo graffiti izay zarainay eto anio. Omaly vao nifankahita tamina mpanakanto iray izay nampiasa ny fasika mba handrisihana ny fahatsapana ny halaliny, raha 1010zz no nahatratra azy teo amin'ireo rindrina ireo hamela antsika somary gaga amin'ny asany.
Ny rindrina sasany izay toa manana lavaka lehibe na ampahany amin'ny fidirana amin'ny grotto psychedelic izay nitodihan'izao tontolo izao ary ny halaliny dia toa tsy nisy fiafarany. Miaraka amin'ny fampifangaroana ny sosona sy ny tonony isan-karazany, dia miteraka fiatraikany lehibe izay ny zavatra mora indrindra dia ny miala amin'ny toerana ahafahany mahita raha efa nampiasaina teo amin'ny rindrina ny chisel.
1010zz dia manambara ny fikarohany fatratra avadiho avy eny amin'ny tanàn-dehibe ireny toerana ireny amin'ny fanehoana zavakanto mahafinaritra miaraka amin'ity mpanakanto graffiti ity izay na dia amin'ireo sanganasa izay hitantsika amin'ny fampiratiana samihafa aza dia manana toetra mampiavaka azy. Milalaova ny abstract toy ity fitambarana ity izay manaraka ny toerana izay manome loko ny loko rehetra mba hamoronana ny halaliny.
Ity mpanakanto graffiti ity dia hanome antsika fotoana hanehoana toa an'i Jen Stark izay milalao psychedelia amin'ny loko asidra ary hizahantsika fotoana fohy hanehoana ny fomba anehoan'ity endrika kanto ity ny fihetsiketsehana sy ireo endrika misosa mankany amin'ny maizina. Izay mainty sy mainty izay no iafaran'ireo hazavana rehetra ireo.
Tsy afaka nahita mombamomba ahy tamina tambajotran-tserasera 1010zz aho, mba hahafahanao mahita izany midira amin'ny Instagram mahita sasany ny asany dia noho ny tenifototra # 1010zz. Mpanakanto graffiti iray tsy mitovy amin'ny nahazatra antsika ary noho io antony io dia tena miavaka, na dia tsy mahita fikomiana amin'ireto sanganasa zaraina eto ireto aza izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Psychedelia sy ny fikarohana ny graffiti lalina amin'ny 1010zz
Raúl Martín, ilay mpanazava ny Paleontology
Ny fahalianana amin'ny sary mahatalanjona 50 izay mbola tsy hitanao teo aloha